လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်စိတ်ဒဏ်ရာလက္ခဏာများပြသနာများရှိသည့်လူငယ်များ၏အလွဲသုံးစားမှုဖွင့်ဟဖော်ထုတ်မှု (2018) - Your Brain On Porn
အပြည့်အဝလေ့လာမှု: အလွဲသုံးမှု ထုတ်ဖော် ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့စိတ်ဒဏ်ရာ symptomology နှင့်အတူလူငယ်၏
ရေဗက္ကာ Dillarda Kathry ဎMaguire-ဂျက်aKathryn ShowalteraKathryn G. အဝံပုလွေbMegan အမ်Letsoncd
ကလေးများအဘယ်သူသည် ထုတ်ဖော် ထိတွေ့ ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုထုတ်ဖော်မပြုခဲ့သူကိုလူငယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ 3.3 ကြိမ် PSB မြားတှငျပါဝငျခွငျးထုတ်ပြန်အသိပေးခြင်းမြင့်မားလေးသာမှုရှိခဲ့ပါတယ်။
ကလေးများအဘယ်သူသည် ထုတ်ဖော် ထိတွေ့ ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း PSB ထုတ်ပြန်အသိပေးခြင်း၏သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အလေးသာခဲ့ရသည်။ ယခင်ကလိင်ကြမ်းတမ်းအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသူကိုလူငယ်နှင့်အတူဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဤသည်တွေ့ရှိချက် (လူမှုရေးသင်ယူမှုသီအိုရီ၏အခြေအနေတွင်သဘာဝကျပါတယ်Burton & Meezan, 2004) ။ လူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်မှာညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုရှိခြင်းသူတို့နောက်ဆုံးမှာဆည်းပူးစေခြင်းငှါအပြုအမူတွေကိုကလေးမိတ်ဆက်ပေးစေခြင်းငှါမသာပေမယ့်သားသမီးတို့သည်မော်ဒယ်များ (ဥပမာသည့်ညစ်ညမ်းအလတ်စားမှာပြထားတဲ့တစ်ဦးချင်းစီကိုမွငျလြှငျဖွငျ့အားဖြည့်သူတွေကိုအပြုအမူတွေ, ညစ်ညမ်းဖို့သူငယ်ကိုထိတွေ့သူရှိစေခြင်းငှါ , etc) ကအပြုအမူအားဖြင့်ဆုခခြံခံရ။ ထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်သူငယ်အတွက်အားဖြည့်နေတယ်ဆိုရင်, သူတို့အပြုအမူသူတို့ကိုယ်သူတို့ချမှတ်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားဖြစ်နိုင်ခြေရှိနိုင်ပါသည်။
မတိုင်မီကသုတေသနညစ်ညမ်းစောစောထိတွေ့နေတဲ့စွန့်စားမှုကြောင်းပြသထားပါတယ် အချက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် နောက်ပိုင်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုများ၏ လူငယ်ဘဝ (ရေလွှမ်းမိုးခြင်း, 2009; Seto & Lalumière, 2010) ။ ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက်ညစ်ညမ်းမှမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှု 10-12 နှစ်ပေါင်း (လူငယ်အသက်အရွယ်အကြားသိသိသာသာတိုးလာMitchell, Wolak, & Finkelhor, 2007). Seto, Maric နှင့် Barbaree (2001) ထို့အပြင် etiologically, ပြီးသားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ predisposed နေသောယောက်ျားလိင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူအပေါ်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု၏အပြင်းထန်ဆုံးသက်ရောက်ပြကြောင်း posited သိရသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကလေးများအတွက်ညစ်ညမ်းနဲ့ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအကြားတွေ့ရှိရဆက်ဆံရေး၏ခွန်အားတူညီတဲ့အသက်အရွယ်နုပျိုသောသားသမီးတို့အဘို့စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ နောက်ထပ်သုတေသနညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုအထူးသဖြင့်အဲဒီကကလေးတွေကိုများအတွက်ပိုမိုအားကောင်းသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်လျှင်ကလေးများ PSB ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ predisposed နှင့်စေခြင်းငှါအခွားအဘယျနညျးလမျးကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့ဆိုလျှင်တစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုအမှု PSB ၏ဆက်သွယ်မှုများအတွက်လုပ်စောစောညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု၏ဘုံအန္တရာယ်အချက်မှတဆင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လိင်ကြမ်းတမ်းအပြုအမူနိုငျသညျ။
ပြဿနာနှင့်အတူလူငယ်အများစုမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ (PSB) အလွဲသုံးစားမှုအတွေ့အကြုံများသို့မဟုတ် substantiated ပါပြီ အကြမ်းဖက်မှုမှထိတွေ့မှု (Silovsky & Niec, 2002) ။ PSB နှင့်လူငယ်ကို PSB နှင့်မတူသူနှင့်ခွဲခြားနိုင်သည့်သီးခြားအလွဲသုံးစားမှုအတွေ့အကြုံများအကြောင်းကိုအနည်းငယ်သာသိရှိရသည်။ လေ့လာမှုအနည်းငယ်နှင့်ဆက်စပ်သောအလွဲသုံးစားမှုအမျိုးအစားများကိုလေ့လာခဲ့သည် Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှု symptomology ။
လက်ရှိလေ့လာမှုနှစ်ခုသုတေသနမေးခွန်းများကိုစူးစမ်း: (1) PSB နှင့်အတူသားတို့သည်မိမိတို့အလွဲသုံးစားမှုထုတ်ဖော်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ PSB မပါဘဲသားများမှကွာခြားပါနဲ့ ?; နှင့် (2) post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုအတိုင်းအတာအပေါ်ကလေး၏ရမှတ်များနှင့်ဆက်စပ်ထုတ်ဖော်အလွဲသုံးစားမှုအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည် ?.
ဒေတာများ (လူငယ်များအတွက်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်N တစ် ဦး ပြီးစီးခဲ့သူ = = 950) အသက် 3-18 နှစ်က လက်တွေ့အကဲဖြတ် အဆိုပါ 2015 ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကလေးတစ်ဦးစည်းရုံးရေးစင်တာမှာ။
လူငယ်တစ်ဦးမှုခင်းအင်တာဗျူးနှင့်ဖြစ်စေသည့်အကြိတ်ရောဂါလက္ခဏာထည့်သွင်းကြောင်းအကဲဖြတ်ပြီးစီး စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း ကလေးများအသက်အရွယ် 3-10 နှစ်ပေါင်းလူငယ်ကလေးများ (TSCYC), သို့မဟုတ်ကလေးများများအတွက်စိတ်ဒဏ်ရာလက္ခဏာတွေစာရင်း (TSCC) အတွက်ကလေးများ၏အသက်အရွယ် 11-16 နှစ်ပေါင်း။ Bivariate Logistic ဆုတ်ယုတ် သုတေသနမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
တွေ့ရှိချက်များကိုလူငယ်များသည်ထုတ်ဖော်သူညွှန်ပြ သားကောင် fondling မှပြစ်မှုကျူးလွန်သူ (PSB ထုတ်ဖော်ရန်လျော့နည်းဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်OR = 0.460, p = .026) နှင့်ထိတွေ့ကလေးများ ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း (PSB ထုတ်ဖော်ရန် ပို. ခဲ့ကြသည်OR = 3.252, p = .001) ။ ထို့အပြင်ထုတ်ဖော်သူကိုလူငယ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု (OR = 1.678, p = .001) သို့မဟုတ်မှသားကောင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆက်အသွယ် (OR = 2.242, p = .003) ဆေးခန်းသိသိသာသာစိတ်ဒဏ်ရာရမှတ်များပိုမိုမြင့်မားအလေးသာရှိခဲ့ပါတယ်။